Dr. Tint Swe's Writings: July 2018
Food and diet writing links အစားအသောက်နှင့် အာဟာရစာများ
ဆရာရှင့် ခုတလော မိတ်ဆွေမိသားစု တော်တော်များများ ကလေးလူကြီးအားလုံး ရောဂါရှိရှိမရှိရှိ ဒီဆေးတွေ မိသားစုလိုက် နှစ်ရှည်စွဲသာက်နေတဲ့အပြင် ကျွန်မတို့ကိုပါသောက်ဖို့ အကြံပေးနေတာမို့ အမြဲစွဲပြီး သောက်သင့် မသောက်သင့် ဆရာ့ထံတင်ပြတာပါရှင့်။
Optimized filate 1000
Super selenium complex200mcg
Apple cider veniger အဲ့ဆေးတွေပါရှင့်။
နေ့စဉ် ဒီလောက်ဆေးအများကြီး ကလေးလူကြီး သောက်နေတာ သောက်သင့်မသောက်သင့် ဖြေပေးပါနော်။ ရိုသေ လေးစားစွာဖြင့် ဆရာအကြံပေးတာ စောင့်နေပါမယ်ရှင့်။ လေးစားစွာဖြင့်။ မ့့
မေးခွန်းတဲ့ပါတဲ့ ဆေးဆိုတာတွေရဲ့ လင့်တွေပေးလိုက်ပါတယ်။
• Minerals ဓါတ်ဆားများ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/minerals.html…
• Omega-3 (အိုမီဂါ သရီး) ဘာလို့ နာမည်ကြီး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/omega-3.html…
• Probiotics ပရိုဘိုင်အောတစ် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/probiotics.html…
• Vitamin B12 ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/vitamin-b12.html…
• Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-d.html
• Zinc သွပ်ဓါတ် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/zinc.html
အဲဒီအာဟာရပညာရှိတွေကို ဒါဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါဦး။
1. Babies and vitamins ကလေးငယ်နဲ့ ဗီတာမင် http://doctortintswe.blogspot.com/…/babies-and-vitamins.html
2. Banana Diets ငှက်ပျောသီး-အာဟာရ http://doctortintswe.blogspot.com/…/diet-for-breastfeeding-…
3. Bee pollen granules ပျားကနေထုတ်တဲ့ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/bee-pollen-granules_19.…
4. Breast Milk Storage နို့ရည်ကို ဘယ်လိုထားသိုမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/…/breast-milk-storage.html
5. Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/calcium.html
6. Calcium blood test (ကယ်လ်စီယမ်) စစ်ဆေးခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/…/calcium-blood-tes…
7. Cereal မနက်စာ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/cereal.html
8. Chicken egg and Duck egg ဘဲဥကို ပွတ်စားပါတဲ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/duck-eggs.html
9. Chicken eggs and Cholesterol ကြက်ဥနဲ့ (ကိုလက်စထော) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/chicken-eggs.html
10. Cholesterol and food ကိုလက်စထောနဲ့ အစားအစာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/cholesterol-and-food.ht…
11. Cholesterol ကိုလက်စထော http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cholesterol.html
12. Cirrhosis Diet အသည်းခြောက် အစားအသောက် http://doctortintswe.blogspot.com/20…/…/digestive-myths.html
13. Coconut oil အုန်းဆီ၊ စားအုန်းဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/coconut-oil.html
14. Cod liver oil ငါးကြီးဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cod-liver-oil.html
15. Cooking Oils စားသုံးဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cooking-oils.html
16. Corn ပြောင်းစားနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/corn.html
17. Crash diets ပိန်စာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/crash-diets.html
18. Diabetes diet ဆီးချိုအတွက်အစားအစာများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/diabetes-diet.html
19. Diet and cancer ကင်ဆာ နဲ့ အစားအစာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/diet-and-cancer.…
20. Diet forabreastfeeding mom (1) နို့တိုက်မိခင် ဘာစားချင်လဲ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/…/diet-for-breastfeeding-…
21. Diet forabreastfeeding mom (2) နို့တိုက်မိခင် ဘာစားချင်လဲ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/banana-diets.html
22. Digestive Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/…/cirrhosis-diet.html
23. Eggs and Sprite အားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ http://doctortintswe.blogspot.com/20…/…/eggs-and-sprite.html
24. Eggs ကြက်ဥ အစရှာခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/eggs.html
25. Evening primrose oil ညနေခင်း နှင်းဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/…/evening-primrose-oil.ht…
26. Folic acid ဖေါလစ်-အက်စစ် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/…/folic-acid.html
27. Food combination အစားအစာ ဘယ်လို တွဲစားသင့်ပါသလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/…/03/food-combination.html
28. Food for and not for Diabetes http://doctortintswe.blogspot.com/…/food-for-and-not-for-di…
29. Food for health အစားအသောက် http://doctortintswe.blogspot.com/20…/…/food-for-health.html
30. Food Storage and Safety Guidelines အစားအသောက် သိုလှောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/food-storage-and-safety…
31. Foods for Healthy Hair ဆံပင် အာဟာရ http://doctortintswe.blogspot.com/…/foods-for-healthy-hair.…
32. Hard-Boiled Egg Vs Fried Egg ကြက်ဥကျော်နဲ့ ကြက်ဥပြုပ် http://doctortintswe.blogspot.com/…/hard-boiled-egg-vs-frie…
33. High Calorie Food (ကယ်လိုရီ) များတဲ့ အစားအစာများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/high-calorie-foo…
34. High Cholesterol diet (ကိုလက်စထော) များလို့ မစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/…/high-cholesterol-diet.h…
35. Iodine ပင်လယ်နဲ့မနီး လည်ပင်းကြီး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/01/iodine.html
36. Iron supplement and Liver diseases သံဓါတ်နဲ့ အသည်းရောဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/iron-supplement-…
37. Iron supplements သံဓါတ်အားဆေး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/…/iron-supplements.…
38. Liver Tonics အသည်းအားဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/liver-tonics.html
39. Milk types နွားနို့အမျိုးအစားများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/milk-types.html
40. Minerals ဓါတ်ဆားများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/minerals.html
41. Nutrition Facts အမြစ်-အသည်း ခွဲသိရအောင် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/…/nutrition-facts.h…
42. Nutrition for women အမျိုးသမီးများအတွက်အာဟာရ http://doctortintswe.blogspot.com/…/nutrition-for-women.html
43. Nutrition အာဟာရ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/12/nutrition.html
44. Oat အုတ်စပါး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/oat.html
45. Obimin အိုဗီမင် အားဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/nutrition.html
46. Omega-3 (အိုမီဂါ သရီး) ဘာလို့ နာမည်ကြီး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/…/omega-3.html
47. Palm oil and Coconut oil စားအုန်းဆီနဲ့ အုန်းဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/palm-oil.html
48. Raw food အစိမ်းစားတဲ့အလေ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/raw-food.html
49. Saturated Fatty Acids and Health risks ဆီ၊ အဆီနဲ့ ကျန်းမာရေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/saturated-fatty-acids-a…
50. Supplementary foods ကလေးအတွက် ဖြည့်စွက်စာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/supplementary-foods.html
51. Tonics အားဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/tonics.html
52. Trans Fats ကျန်းမာရေးနှင့် မသင့်သော စားသုံးဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/trans-fats.html
53. Trans Fats ကျန်းမာရေးနှင့် မသင့်သော စားသုံးဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/trans-fats.html
54. Trans Fats အညာသားများဆီစားကြသည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cooking-oils.html
55. Types of Eggs ကြက်ဥအမျိုးမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/types-of-eggs.html
56. Vegetarianism သက်သတ်လွတ် နှင့် ကျန်းမာရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vegetarianism.html
57. Vitamin A ဗီတာမင် (အေ) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/vitamin.html
58. Vitamin B complex ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စု http://doctortintswe.blogspot.com/…/…/vitamin-b-complex.html
59. Vitamin B12 and Iron supplement ဘီ-၁၂ နှင့် သံဓါတ်လိုအပ်ချက် http://doctortintswe.blogspot.com/…/vitamin-b12-and-iron-su…
60. Vitamin C ဗီတာမင် (စီ) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/vitamin-c.html
61. Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-d.html
62. Vitamin E ညိုချောလေးတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-e.html
63. Vitamin K ဗီတာမင် (ကေ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-k.html
64. Vitamins and memory ဗီတာမင်တွေက မှတ်ဥာဏ်တိုးစေနိုင်သလား http://doctortintswe.blogspot.com/…/vitamins-and-memory.html
65. Zinc သွပ်ဓါတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/zinc.html
တနှစ်အတွင်း ထပ်ရေးရတာတွေရှိသေးတယ်။ မထည့်တော့ပါ။ ငယ်ငယ်က အမေချက်ကြွေးတဲ့အစားအစာထက် ကောင်းတာ ဒီခေတ်မှာ ကြော်ငြာ။ အဖေဝယ်ပေးတဲ့ အားဆေးထက် ကောင်းတာ ဒီခေတ်မှာ ကြော်ငြာ။ တချို့ဆရာဝန် နာမည်ခံတွေကလည်း ကြော်ငြာ။
Photo by Dr. Maung Win
နဝတ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကထုတ်ထားတဲ့ မြန်မာ အဘိဓာန်၊ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်တွေမှာ ဘူးပင်လို့သာ တွေ့ပါတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ ဗူးပင်လို့သာ ရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။
အခုသတ်ပုံစာအုပ်မှာ ဘူးရွက်တဲ့။ ဗူးကို ကလေးဗူးမှုတ်တာတခုတည်းလို့ လုပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ဗူးရွက်လို့ ရေးတယ်။ ရေဗူးလို့ ရေးတယ်။
ဘူးတလုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲ။ ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူးဆိုတာ ဘူးနှစ်လုံးဆောင်။
ဗူးခါးရေနဲ့ ကြမ်းကြားလေကို ဘယ်လိုရေးရေး အေးပါတယ်။
နမူနာလေး (၂) ခုပေးပါရစေ။
၁။ ဆေးလိပ်လက်ဆောင် (မယ်ခွေ)
၂။ ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်း (မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရား)
ထို့ကြောင့် မြင်ဘူး၊ ကြားဘူး၊ နံဘူး၊ စားဘူး၊ တွေ့ထိဘူး၊ ကြံသိဘူးသော ထိုအတိတ်ရုပ်နံတို့ကို ပြန်၍စဉ်းစားမိတိုင်း ဃနပညတ်ထင်ရှားလျှက် နိစ္စ၊ သုခ၊ အတ္တဟု ထင်မြင်စွဲလမ်းမှုသည် ဖြစ်ပေါ်၏။
ရှစ်လေးလုံး နဲ့ ကျွန်တော်
သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက်၊ သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက် ဆိုတဲ့သံပြိုင် ဟစ်ကြွေးသံတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်အိပ်ယာက နိုးလာခဲ့တာဟာ ၈-၈-၁၉၈၈ မနက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကြီးဆုံးသားနဲ့အတူ ထားဝယ်သတ္တုတွင်း တည်းခိုရိပ်သာမှာ တည်းခိုနေကြရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဆရာဝန် ဖြစ်ကတည်းက စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲမှာသာ တောက်လျှောက် တာဝန်ကျနေရာကနေ ထားဝယ်မြို့နယ်၊ ဟိန်းဇဲသတ္တုတွင်းဆရာဝန်အဖြစ် ရွေ့ပြောင်းခံရလို့ တာဝန်ထမ်းနေခဲ့တာ တပါတ်တိတိသာရှိပါသေးတယ်။
သားအဖနှစ်ယောက် ထားဝယ်မြို့ထဲ လျှောက်ကြည့်ကြတယ်။ လူပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဆန္ဒပြနေသူတွေထဲ ရောက်သွားလိုက်ကြ၊ ဘေးကနေလိုက်လိုက်ကြ။ ထားဝယ်စကားကိုနားမလည်ပေမဲ့ ဖြစ်နေတာတွေမှန်သမျှ ဘာသာပြန်စရာမလိုဘဲ သိပါတယ်။ တနေရာမှာတော့ အလှူခံလူငယ်တယောက်ရဲ့ ခွက်ဖလားထဲကို အကြီးဆုံး ပိုက်ဆံစက္ကူတရွက် ထည့်လှူလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ ရှစ်လေးလုံးအတွေ့အကြုံဆိုတာ ဒီလောက်သာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစုတခုလုံးကိုတော့ ရှစ်လေးလုံးအဖြစ်သနစ်ကြီးကနေ မထင်မှတ်တာတွေ၊ မမျှော်မှန်းတာတွေဟာ တသက်တာအတွက် ဆက်တိုက် ဖြစ်လာစေဘို့ သန္ဓေပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေက အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲလာနေပါပြီ။ မဆလ အစိုးရဘယ်လိုမှ လုပ်မရတော့ပါ။ ထားဝယ်လူထုကိုကြည့်ပြီး၊ အလုပ်ခွင်ရှိရာ ဟိန်းဇဲသတ္တုတွင်းကို ပြန်မသွားတော့ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းလေးတွေ ဒီအတိုင်းထားခဲ့တယ်။ အစိုးရအလုပ်ဆိုတာလည်း ကမ္မသကာ။ လစာ၊ ပြောင်းရွေ့ခရီးစရိတ်လည်း နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး။ ကိုယ်လိုပဲ ရှစ်လေးလုံးကနေ ဘဝတွေကို သွက်သွက်ခါ အပြောင်းခံရသူတွေ ထုနဲ့ဒေး ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထားဝယ်ကနေ မိသားစုရှိရာ မုံရွာ-ပုလဲပြန်ဖို့ရာ ရန်ကုန်ကိုလေယာဉ်စီးပြီးမှ မီးရထားနဲ့ သွားရမယ်။ ထားဝယ်ကနေ လေယာဉ်မထွက်တော့ပါ။ လေဆိပ်ကို ၃-၄ ရက် သွားသွားစောင့်ကြရတယ်။ လေယာဉ်ကို လှမ်းမြင်နေရပေမဲ့ အောက်မဆင်းလို့ ပြန်လာရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ထိုင်ခုံနှစ်နေရာရလို့ မြန်မာ့လေကြောင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်ကနေ မြို့ထဲသွားဘို့ တက်စီမရှိပြန်ပါ။ ဟိုမေးသည်မေး၊ နောက်ဆုံး ကားကြုံတစီးရပါတယ်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးမှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေကနေ ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့သလဲလို့ မသိနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက လူမသိအောင်နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ရိုးစင်းတဲ့လူတွေကလဲ လူမသိအောင် အချင်ချင်းရိုင်းပင်း ကူညီခဲ့ကြတယ်။
မြို့က သေးပေမဲ့ ပုလဲမှာလည်း ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေကနည်းတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ မသိမရှိပါ။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါ လမ်းပေါ်ထွက်အော်တယ်။ ကျွန်တော်က အစိုးရအလုပ်က မထွက်ရသေး။ ဆန္ဒပြသူတွေအတွက် ကိုယ့်ဖါကိုယ် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့လုပ်ပြီး ကူညီရပါတယ်။ နောက်တက်လာတဲ့ စစ်အစိုးရကနေ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ကို သူတို့ရဲ့ အရံအင်အားအဖြစ် အသုံးချခဲ့တာကို တွေ့မြင်ရတော့ အတော်စိတ်နာပါတယ်။
သားတွေကလည်း သူတို့နည်းသူတို့ဟန်တွေနဲ့ လုပ်ကြတာ။ မခိုင်းရပါ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဘယ်သူကမှ လာမခိုင်းပါ။ စစ်အစိုးရကနေဝါဒဖြန့်တဲ့ ရှစ်လေးလုံးဖြစ်အောင် နောက်ကနေသွေးထိုးသူဆိုတဲ့ ဗကပ ဆိုတာကို ကျွန်တော် တစွန်းတစမှ မသိသေးချိန်ကပါ။
အစိုးရဝန်ထမ်းမှန်သမျှ အရင်က မဆလ ထဲမဝင်ရင် ရာထူးမတိုး၊ ပစားမပေးခဲ့ရာကနေ ရှစ်လေးလုံးတန်ခိုးနဲ့ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရ ဖြစ်လာပါတယ်။ မဆလ ကံမကောင်းပေမဲ့ ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် အစိုးရအလုပ်ကနေ ထွက်တဲ့။ အဲဒီခေတ်မှာက ဆရာဝန်အလုပ်ရဘို့ထက် ထွက်ဘို့က ပိုခက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကိုဆင်းပြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးညွှန်ချုပ်ရုံးသွား အလုပ်ထွက်စာတင်ပါတယ်။ တပါတ်သာကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ထွက်ခွင့်ရပါတော့တယ်။ ဒီအတွက်တော့ ကျေးဇူးပါ စစ်အစိုးရခင်ဗျား။
ဖျာဆုတ်မှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ နောက်ဆုတ်၊ ဆုတ်ယုတ်၊ စုတ်ပြတ်၊ စုပ်ပြဲ နဲ့ ဆုပ်ကိုင် တခုခုဖြစ်ပါမယ်။
ထဲမှာ (း) မလိုပါ။ တခါတည်းက ပိုမှန်တယ်။ သောက်ရတယ်လို့သာရေးသင့်ပါတယ်။ ဒယ်ကို ဒယ်အိုး တမျိုးတည်းသာ သုံးတယ်။
၃။ ကျွန်မက အသက်၂၇ နှစ်ပါ သားဦးကိုယ်ဝန်ပါ og နဲ့အပ်ထားပါတေ folic acid, Omega3 သောက်နေပါတေ့့
တေလို့ မသုံးရပါ။ အပ်ထားပါတယ်၊ သောက်နေပါတယ်၊ ပြန်ကောင်းသွားတယ်၊ သွားပြပါတယ်၊ ရှိတယ်ပြောပါတယ်၊ ရှိတယ်၊ သက်သာပါတယ်၊ ယားပါတယ်၊ လိမ်းပါတယ်၊ စိုးရိမ်ပါတယ်၊ စိတ်ညစ်ပါတယ်လို့ ရေးရမယ်။
တယ်လို့ရေးပြီး၊ ဖတ်တော့ ဒယ်လို့ဖတ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ (၉) ရက်
ဆရာနဲ့ မွေးလတူတယ်။ လေးစာရသူမို့ ကြံဖန် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်။
စင်္ကာပူမှာ သူ့အမျိုးတွေနေတဲ့ ရန်ကုန်က ဖရင်းတယောက်ကလည်း ဆရာ့မွေးနေ့က စင်္ကာပူအမျိုးသားနေ့လို့ ရေးတယ်။
အဲတာလည်းဟုတ်တယ်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၉) ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံ နာဂါဆာကီမြို့ကို အမေရိကန်တပ်က အနုမြူဗုံးချလို့ လူပေါင်း ၇ သောင်းကျော် သေဆုံးခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့က ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းအမျိုးထဲကပါ။ ဦးကောင်းကို ချီးမွမ်းရေးသားကြတာတွေသာမက ဦးကောင်းလိမ်ထုတ် စကားကိုပါ အမွေခံကြရတယ်။
ဟုတ်။ သူက ကျွန်တော့်ဆီကို လက်ဆောင်တွေလှမ်းပို့ဖူးတယ်။ ကျေးဇူး။
ကြမ်း ကျမ်း ကျန်း
တခြားသူတင်ထားတဲ့ပို့စ်တခုအောက်မှာ ကြမ္မာပါစေလို့ရေးတာတွေ့လို့။ ဟိုအရင်ကတော့ ကျမ္မာလို့ရေးတာ နည်းနည်းရှိတယ်။ ကန်းမာလို့သာ အများကရေးကြတယ်။ ရရစ်နဲ့တော့ မတွေ့ဖူးပါ။ ကြမ်းဆိုရင် ကုန်ကြမ်း၊ ထမင်းကြမ်း၊ နင်းကြမ်း၊ ကြမ်းပိုးတို့မှာသာ သုံးတယ်။
ကျမ်း (ပေစာညှပ်သော သစ်သားချပ်)
၁။ ပတ်တီး စီးထားရင်သက်သာပေမဲ့ ခြေဖဝါးနဲ့အဆစ်တွေရောင်လာတယ်။ ဘိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေနိင်မလဲ ပြောပြပေးပါရှင်။
စာရိုက်လွဲတာတော့ မဟုတ်နိုင်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကို မသိသူဖြစ်မယ်။ ဗိုလ်ကျောင်းထွက်လား ဘိုကျောင်းထွက်လား မပြောတတ်။ ရွှေဘိုသူတော့ မဟုတ်လောက်။
၂။ သွေးဆေးသောက်တာ ၃ ပတ်လောက်သွေးဆင်းနေတယ် ဘိုလုပ်ရမလဲဆရာ ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဖြစ်တဲ့သူ အသက်-ကျား-မ မသိပါ။ ဘာဖြစ်နေသလဲ မသိပါ။ ဘိုလိုရော ဗမာလိုပါ ပြန်ဖြေလို့မရပါ။ ဆောရီး။
ရွက်ဝါတွေ နွေသစ်စမှာ ကြွေပစ်ကြမစဲပေ
ငိုနေတဲ့ သစ်ရွက်တွေဟာ အို မေရဲ့ချစ်မျက်ရည်လား
ကြည့်လိုက်စမ်းနွေ ကြည့်လိုက်စမ်း မေရေ
တရားနဲ့သာ ဖြေပေတော့ မေရေ
တွေးလေ တွေးလေ ဝေးနေတဲ့ အမှန်တရား
မေ့ထံပါးမှာ ရှိနေတာဆို ဘာဆိုဘာမှ
ဟင် မေ့ဘဝမှာ အကောင်းကိုရှာသော်ငြား
အချစ်ဆုံးကိုတွေ့ပေမယ့် အချစ်တွေမဆုံးနိုင်တဲ့ မေပါလေ
တနွေမှ တနွေကူးလို့ ကြွေဖူးတဲ့ရွက်ဝါလေးတွေသာ
နွေဆိုတာ ကြောက်ချင် ကြောက်မည်
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လှိုင်းပုတ်ချင်စရာ ကမ်းခြေလေးတစ်ခု
ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်တည်ခဲ့တာ ခေတ်မီသတဲ့လား
အို မေရယ် မေရယ်လေ
ဝတ္ထု - ဒဂုန်တာရာ
တေးရေး - အလွမ်းသီချင်းရေးတဲ့ မောင်ကျော်ဇော
တေးဆို - ခင်ညွန့်ရည်
ဂီတမှူး - စန္ဒရားတင်ဝင်းလှိုင်
၁။ ဆရာ ကျွန်မသမီး အသက် ၁၀နှစ်ရှိပါပြီ။့့ ကပါ။ သမီးအသက် ၆နှစ်လောက်ကတည်းက နှာအမြဲစေးပါတယ်။ ရာသီဥတု အေးတော့ ဆေးသောက်လိုက် ကောင်းသွားလိုက်ပေါ့ဆရာ။ အသက် ၈ နှစ်လောက်ကစပြီး နှာခေါင်းတဖက် လုံးဝပိတ်သွားတယ်။ အိပ်ရင် အရမ်းနေရခက်ပုံပေါ်ပါတတ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄လလောက်က ထိုင်းကိုသွားပြပါတယ်။ ဆရာဝန်က ခေါင်းကို x rayရိုက်ပါတယ်။ နှာခေါင်းထဲက အနောက်ဘက်ကို နှာရည်စီးတဲ့ ပြွန်ပိတ်နေတယ်ပြောပါတယ်။ နှာအမြဲစေးနေတော့ နှာခေါင်းထဲ ဘက်တီးရီးယားတွေ အောင်းနေလို့ ရောင်ရမ်းပြီး ပိတ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ ခွဲချင်ရင် ခွဲလို့ရတဲ့ အခြေအနေ ရှိနေပြီလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးက မခွဲချင်တော့ ပိုးသတ်ဆေး ၂ပတ်စာနဲ့ Cetrine အမျိုးအစား တညတလုံး ၃လစာ။ နှာခေါင်းထဲ ဖျန်းတဲ့ဆေး nasonex တရက်၂ကြိမ် ဖျန်းခိုင်းပါတယ်။ အခု နည်းနည်း သက်သာသလိုတော့ ရှိပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ထိုင်းကိုမသွားဖြစ်သေးတော့ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေး ဆက်သောက်ရမလားရှင့်။ ဆေးကြာရှည် သောက်မိလို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလဲ သိပါရစေ။ ဆရာရေးတဲ့ နှာခေါင်းထဲ အဖုရှိတာနဲ့ ရောဂါ အတူတူပဲလားရှင့်။ ခွဲလိုက်ရင်ရော လုံးဝ ကောင်းသွားနိုင်လားရှင့်။ ရိုသေစွာ အကူအညီ တောင်းခံအပ်ပါတယ်။
အနောက်ဘက် မဟုတ်။ နောက်ဘက်လို့ရေးရတယ်။ အနောက်ဆိုတာ အနောက်အရပ်။
၂။ ကျွန်မ့့ မှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ နာမည်က့့ ပါ။ အသက်က ၃၄နှစ်၊ အိမ်ထောင် ကလေး ၂ ယောက်မိခင်ပါ။ ၁။ ဒီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ နှာမွှန်၊ နှာဆေးပါတယ်။ ၁၉ ရက်နေ့ကစပြီး သတိထားမိလောက်အောင် နှာခေါင်းအလယ် တဝိုက်မှာ နာနေပါတယ်။ နာနေတဲ့ပုံစံက တခုခုနဲ့ ဆောင့်မိပြီး ခိုင်းမိထားသလိုမျိုး ဖွဖွလေးနာနေတာပါ။ နားထင် တဖက်ဆီမှာလဲ တချက်ချက်ကိုက်ပါတယ်။ ၁၉ ရက်နေ့ညမှာပဲ Tiffy Day နှစ်လုံးသောက် အိပ်လိုက်ပါတယ်။ ၂ဝ ရက်နေ့ မနက်ကျတော့ နှာမွှန်တာ နည်းနည်းသက်သာပေမဲ့ နှာခေါင်း အလယ်တဝိုက် နာနေတာမသက်သာပါဘူး နေ့လယ်လောက်မှာ နှာခေါင်းအလယ်တဝိုက် အရိုးရှိတဲ့နားမှာ အနီရောင်သန်းလာပြီး ရောင်သလိုဖြစ်လာပါတယ်။ ညဖက်အလုပ်ကအပြန် ဆေးဆိုင်ဝင်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးမေးတော့ Amoxicillin capsules 500 ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ ညစာ မစားခင် တလုံးသောက် ပြီး မအိပ်ခင် တလုံးထပ်သောက်ပြီး အိပ်ပါတယ်။ ခုထိ အရိုးတဝိုက်မှာ ပိုရောင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခေါင်းတော့ မကိုက်တော့ပါဘူး။ တခြားနေရာတွေလဲ နာတာ မရှိသေးပါဘူး။ နှာခေါင်းအလယ် အရိုးတဝိုက်ဆီမှာပဲ ကိုက်သလို နာနေပါတယ်ဆရာ။ အဲဒါ Sinus infection ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆရာ။ ဆရာရဲ့Sinus infection အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပြီးပါပြီဆရာ။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာ ဒါပထမဆုံး အကြိမ်ပါဆရာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆရာဝန်ဆီမသွားသေးပဲ ဆေးအရင်သောက်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဘာဆေးကို သောက်သင့်လဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပေးပါရှင့်။
လူ့မျက်နှာ နှာခေါင်းတဝှိုက်မှာ နဖူးရိုး၊ နားထင်ရိုး၊ မျက်ကွင်းအပြင်ရိုး နဲ့ ပါးရိုး၊အရိုးတွေထဲမယ် အကျိအချွဲ နံရံတွေရှိတဲ့ လေခိုအိတ် ဆိုင်းနပ်စ်စုစုပေါင်း ဘယ်-ညာ လေးစုံ ရှိပါတယ်။ တခုတခုဟာ မီးခြစ်ပုံးအရွယ်လောက် ရှိတယ်။
နှာခေါင်းရောဂါ အမျိုးမျိုးကို စာရင်းချလိုက်ရင် ဒီလိုတွေ့ရပါမယ်။
၁။ Drug Allergy ဆေးတခုခုနဲ့ မတည့်လို့ဖြစ်ရတဲ့ အလာဂျီဖြစ်ခြင်း၊
၂။ Acute or Chronic Sinusitis Ethmoiditisရက်တို-ရက်ရှည် ဆိုင်းနူဆိုက်တစ်မျက်ကွင်းအပြင်ဘက်ရိုးရောင်ခြင်း၊
၃။ Chronic Frontal Sinusitis Chronic Rhinosinusitisနာတာရှည် ဆိုင်းနူဆိုက်တစ်နဖူးထဲကရိုးရောင်ခြင်း၊
၄။ Epistaxis နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း၊
၅။ Foreign Body in the Nose နှာခေါင်းထဲ တခြားပစ္စည်းဝင်ခြင်း၊
၆။ Hematoma of the Nasal Septumနှာခေါင်းပေါက်နှစ်ခုကို ပိုင်းခြားထားတဲ့အကန့် သွေးယိုခြင်း၊
၇။ Nasal Polyps နှာခေါင်းထဲ အသားပိုဖြစ်ခြင်း၊
ဒီစာမှာ ပဌမ ၃ မျိုးအကြောင်းကိုဘဲ ရေးပါရစေ။ အလာဂျီ)ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆိုင်းနပ်စ်)ရောဂါက နှာရည်တွေယို၊ နှာခြေ၊ အနေအထိုင်ခက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ကုသဘို့ Antihistamines Diphenhydramine, Loratadine, Fexofendadineအင်တီ-ဟစ်တမင်းဆေး၊ Decongestants Pseudoephedrineနှာရည်ကျဲဆေး၊ Nasal corticosteroids Fluticasone, Beclomethasoneနှာခေါင်းထဲထည့်ရတဲ့ ကော်တီကို-စတီရွိုက်ဆေးတွေကို သုံးရပါတယ်။
နောက်ပြီး အလာဂျီဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကို ယဉ်ပါးအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ Allergy desensitization လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ နောင် ရှောင်နိုင်မှာပါ။ ဆားရည်ဖြင့်စိမ်ခြင်း၊ Saltwater rinses ဆိုတာ ကရိယာဝယ်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေကျက်အေး ၁ ခွက်ထဲမှာ အိမ်သုံးဆား အိုင်အိုဒင်း မပါလက်ဘက်ရည်ဇွန်း တဝက်၊ မုံ့ဖုတ်ရာမှာသုံးတဲ့ ဆိုဒါမှုံ့ နဲနဲထည့်ရပါမယ်။ ဆိုဒါမှုံ့က အပူမလောင်အောင် ကာကွယ်ယုံပါ။ Vaporizers ခေါ်တဲ့ ရေနွေးငွေ့ရှူတဲ့နည်းလဲ ကောင်းပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးပါ။ ရေကိုပွက်အောင်လုပ်ပေးပြီး ထွက်လာတဲ့ အငွေ့ကို ရှူပေးရတာပါ။ လျှပ်စစ်ရှိလို့ ကရိယာဝယ်သုံးရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဈေးလဲမကြီးပါဘူး။
လူတွေအများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ ထိပ်ကပ်နာ ခေါ်တဲ့ ဆိုင်းနပ်စ်ရောဂါက ဘယ့်လောက်အဖြစ် များသလဲဆိုရင် ဗမာတွေ စွဲနေကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက ကိုရီးယန်းတွေ လေးယောက်မှာ သုံးယောက် ဖြစ်နေသတဲ့။ အစကတော့ အအေးမိတာနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ နဲနဲလေး ကိုယ်ပူ၊ နှာချေ၊ နှာစေး၊ နှာပိတ်၊ ချောင်းလေးဆိုး၊ အားယုတ်၊ မစားချင် မသောက်ချင်ဖြစ်။ ကြာတော့ နှာခေါင်းနောက်ပိုင်းမှာ အဆက်မပြတ် Drip သွင်းပေးသလို အရည်တွေ စီးကျနေပါမယ်။
ပိုးဝင်တာအပြင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်လည်း ဖြစ်ရပါတယ်။ လေခိုအိတ်ကလေးတွေထဲမှာ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်အောင် သေးငယ်တဲ့ လက်ချောင်းပုံ အမွှေးလေးတွေက ပြင်ပကဝင်လာမဲ့ မသင့်တဲ့အရာ မှန်သမျှကို တားဆီးပေးပါတယ်။ ရောဂါရရင် အဲဒီအလုပ် မလုပ်နိုင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗက်တီးရီးယားတွေ ခိုအောင်း၊ ပေါက်ပွါးပြီး ရောဂါရတော့တာပါဘဲ။
၂-၃ လထက် ကြာကြာဖြစ်ရင်တော့ နာတာရှည်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းမှာ နေမထိထိုင်မထိ၊ မသက်မသာ ဖြစ်မယ်၊ နှာရည်ယိုမယ်၊ နှာရည် အရောင်ရှိလာမယ်၊ မျက်နှာမှာ နာနေမေယ်၊ ကိုက်မယ်၊ ကြာလျင် ချောင်းဆိုးပါမယ်၊ ညအချိန်ပိုဆိုးတယ်)။ ပြည်လိုလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။ နှာရည်ကနံလာမယ်။ မွှေးတာ၊ နံတာမသိ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပါးစပ်နဲ့သာ အသက်ရှူရတော့မယ်။ အိပ်ရင် ဟောက်မယ်။ ကလေးများဖြစ်ရင် နားရောဂါဆိုတာ မကြာမကြာရမယ်။ ရက်ကြာကြာနဲ့ ခဏခဏဖြစ်ခြင်းတာမို့ အလုပ်အကိုင်ပျက်၊ စိတ်ပျက်ဖြစ်ပြီး စီးပွါးရေးပါ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါ ဟုတ်-မဟုတ် ရောဂါရာဇဝင်ဖြစ်တဲ့ ပန်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ သောက်ထားတဲ့ဆေး ဆိုတာတွေ သိဘို့လိုပါတယ်။ လိုအပ်ရင် Endoscopy နှာခေါင်းထဲကရိယာနဲ့ ကြည့်မယ်၊ X-ray ဓါတ်မှန်ရိုက်တာ၊ နောက်ဆုံးလိုအပ်ရင် CT Computed tomographyscan ကွန်ပြူတာသုံးပြီး စစ်ဆေးတာလုပ်ရပါမယ်။
ကာကွယ်ဘို့ကတော့ အေးချမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြစ်နိုင်သ၍ ရှောင်ဘို့လိုပါတယ်။ ထိပ်ကပ် ရောဂါကြောင့် အေးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေသူများ အိပ်ကပ် ပြဿနာမရှိရင်တော့ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ်ပြန်လာပေါ့။လေကိုလဲ ရေဓါတ်ရှိနေအောင် လုပ်ပေးနိုင်တာ ကောင်းတယ်။ Respiratory Humidifiers, Electrode Humidifiers, Resistance Humidifiers, Gas-Fired Steam Humidifiers, Whole House Humidifiers ဆိုပြီး ကုပ္မဏီတွေက ကြော်ညာတာတွေရှိပါတယ်။ အခန်းကို အနံ့အသက်တွေလဲ ကင်းရှင်းအောင်လုပ်ပါ။
နာတာရှည်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဆေးကုသရာမှာလဲ သာမန်ကာရှံကာမဟုတ်ဘဲ အပြင်းအထံနည်း Aggressive treatment သုံးသင့်ပါတယ်။ နှာခေါင်းပုံပန်းပျက်နေသူတွေကိုတော့ ခွဲစိတ်ပေးဘို့လိုမယ်။ နောက်ပြီး နှာခေါင်းထဲထည့်ရတဲ့ ကော်တီကို စတီရွိုက်ဆေးတွေ ပေးရမယ်။ ဆားရည်နဲ့စိမ်နည်းသုံးရမယ်။
ဆေးမကုဘဲထားလျင် အင်ဖက်ရှင်)ဟာ အတွင်းထဲ၊ အရိုးထဲ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ နဖူးထဲက လေခိုပေါက်မှာ ဖြစ်တာဆိုရင် မျက်လုံးကို သွားဖိနေလို့၊ အရုပ်နှစ်ထပ်မြင်ရမယ်။ နဖူးဖေါင်းလာမယ်။ ဦးနှောက်ထဲ အနာဖြစ်မယ်။ ဦးနှောက်မြှေးရောင်မယ်။ မျက်ကွင်းဘေးကဖြစ်ရင် အနားတဝှိုက် ပြည်တည်နာ Abscess ဖြစ်မယ်။ ပါရိုးထဲဆိုရင် နှာခေါင်းပိတ်နေမယ်။ နားထင်ရိုးထဲဖြစ်ရင် အရုပ်နှစ်ထပ်မြင်တာ၊ မျက်လုံးရွေ့လျားမှု ကောင်းကောင်း လုပ်မရတာ ဖြစ်နေမယ်။ အထဲဆက်ဝင်သွားရင်တော့ ဦးနှောက်ထဲအနာဖြစ်မယ်။ ဦးနှောက်မြှေးရောင်မယ်။
• Antibiotics ပဋိဇီဝဆေး Amoxicillin & Clavulanic acid = Augmentin ES-600, Augmentin, Augmentin XRကို ၁ဝ-၁၄ ရက် သောက်ပါ။
• Decongestants နှာရည်ကျဲဆေးတွေ Pseudoephedrine = Chlor Trimeton, Contac Cold, Drixoral Decongestant Non-Drowsy, Elixsure Decongestant, Entex, Genaphed, Kid Kare Drops, Nasofed, Seudotabs, Silfedrine, Sudafed, Sudodrin, SudoGest, Suphedrin, Triaminic Softchews Allergy Congestion, Unifed)၊
• Saltwater rinses ဆားရည်နဲ့စိမ်နိုင်တယ်။
• Nasal corticosteroids နှာခေါင်းထဲထည့်ရသည့် ကော်တီကိုစတီရွိုက်ဆေးတွေ Fluticasone or Beclomethasoneသုံးရပါလိမ့်မယ်။
• Paracetamol အနာ-အရောင်သက်သာစေအောင် တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်သောက်ပါ။
• Antihistamine Citrizineတည ၁ ပြားသောက်ပါ။
အက်သမွိုက်လေခိုအိတ်များရောင်ခြင်း Ethmoiditis ကတော့ အသက်ရှူလမ်းအထက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်းကတဆင့် ဆက်ဖြစ်ရတာပါ၊ ဗက်တီးရီးယားဒါမှမဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လေခိုအိတ်ရဲ့နံရံတွေကို ပျက်စီးစေတယ်။ အလာဂျီကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူများကို မကူးပါ။ နှာခေါင်းရိုးအနေအထားပုံမမှန်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အားနည်းနေသူ ဆိုရင် ဖန်းဂတ်စ်မှိုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖန်းဂတ်စ်မှိုကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင် ဖန်းဂတ်စ်)ဆေး Amphotrecin B အကြောဆေး ပေးရပါမယ်။
လက္ခဏာတွေကတော့ နဖူးအောက်နား၊ မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကြား၊ နှာခေါင်းရဲ့ဘေးမှာ နာမယ်။ မျက်စိအစွန်နား အနည်းငယ် နီပြီး ရောင်မယ်၊ နာနေမယ်။ နှာခေါင်းကနေ အသက်ရှူရတာ ခက်မယ်။ ဖျားနိုင်တယ်။ အနံ့ ကောင်းကောင်းမရ ဖြစ်မယ်။ နှာခေါင်းပိတ်နေမယ်။ နှာရည်ယိုမယ်။
ဆက်ပြန့်မသွားအောင်တားဘို့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှာရည်ကို သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊ ရေ-အရည် များများသောက်ပေးခြင်း၊ ဆားရည်စိမ်ပေးခြင်း၊ နွားနို့ရှောင်ခြင်းတို့က သက်သာစေပါမယ်။ အလာဂျီကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုရင် ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အခြေအနေကို ရှောင်ပါ။ နှာခေါင်းထဲထည့်ရတဲ့ ကော်တီကို-စတီရွိုက်ဆေးတွေ သုံးပါ။ အင်တီ-ဟစ်တမင်းဆေး Antihistamines Diphenhydramine, Loratadine or Fexofendadineသုံးပါ၊ နှာရည်ကျဲဆေး Decongestants pseudoephedrineသုံးပါ၊ ဗက်တီးရီးယား)ကြောင်ဖြစ်ရင် ပဋိဇီဝဆေး Antibiotics Amoxicillin & Clavulanic acidပေးပါ၊
ပဋိဇီဝဆေးက မထိရောက်တော့ရင် ခွဲရပါတော့မယ်။ Basic endoscopic surgical procedure ခွဲစိတ်ရတာက မေ့ဆေးဖြစ်ဖြစ် ထုံဆေးဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပိတ်ဆို့နေတာတွေ ဖယ်ထုတ်၊ အကောင်းတွေတတ်နိုင်သမျှ ချန်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄ ပါတ်ဆိုရင် ပြန်ကောင်းသွားမှာပါ။
Night terrors အိပ်မက်ထဲ သူရဲစီးခံရခြင်း
အရင်စာမှာ ဘီလူးစီးလို့တပ်ထားလို့သာ ခေါင်းစဉ်ကို သည်လိုရေးပါတယ်။ သူရဲက ရှိတာမဟုတ်။
မကြာခဏ ဘီလူးစီးနေလို့ပါဆရာ။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ။
မေးတဲ့သူ (ဖြစ်တဲ့သူ) အသက်-ကျား-မ မသိရပါ။ အရင်မေးသူရှိလို့ဖြေထားပါတယ်။ အဲဒီတယောက်လည်း မေးနည်း စည်းကမ်းမကျလို့ ပြန်မေးနေရသေးတာ။
ဆရာ မဖြေမှာကိုလည်း နားလည်ပါတယ်ရှင့်။ ဘီလူးစီးတယ်လို့ မြန်မာတွေခေါ်နေတဲ့အဖြစ်ဟာ ဘာဓါတ် ချို့ယွင်းလို့ ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာ အမြန်ဆုံးသိချင်လို့ပါရှင်။ သောက်စရာဆေး စားသင့်သော အစားများကို သိချင်လို့ပါဆရာ။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေပါ သိလိုပါတယ်ရှင့်။
ဘယ်လိုဖြစ်တာကို အဲလိုခေါ်ပါသလဲ။ အရပ်ခေါ်တွေက တနေရာနဲ့တနေရာ မတူပါ။
အိပ်မက်ယောင်လိုအော်နေရပါတယ်။ တစုံတယောက်လာနိုးမှ အော်နိုးလို့ ရပါတယ်။ ဖြစ်တိုင်း စောင် သို့ မဟုတ် အင်္ကျီလည်ပင်းမှာရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဘုရားမရှိခိုးလို့ ပြောပါတယ် ဘုရားရှိခိုးပြီး ကျမဟာ ဘုရားစာအုပ်ဖတ်ရင်း ကျန်းမာရေးစာတွေဖတ်ပြီးမှအိပ်သူပါရှင့်။
အရပ်ခေါ် ဘီလူးစီးခံရခြင်းဟာ လူကြီးတွေမှာသာမက ကလေးတွေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေထဲမှာ ၂% ကနေ ၈% အထိဖြစ်တယ်။ အိပ်မက်ဆိုးပေမယ့် တကယ်ကိုခံစားနေရတာပါ။
Night terrors ဘီလူးစီးခံရခြင်းက Nightmares အိပ်မက်ဆိုးနဲ့ မတူပါ။ အိပ်မက်ထဲမှာ ပါတာတွေက တယောက်နဲ့ တယောက်မတူပါ။ အကျဉ်းအကြပ်တခုကနေ လွန်မြောက်အောင် အင်နဲ့အားနဲ့ ရုန်းကန်ကြိုးပမ်းတာမျိုး။ အမြင့်ကနေ ကျမှာကို ထိန်းမရနိုင်တာမျိုး။ အန္တရာယ်ကနေ ကျော်လွှားရတာမျိုး စတာတွေပါတယ်။ ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့မတော်တဆမှု ကြုံဘူးတာကို မက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ ဘယ်လိုဟာတွေမက်မက် ကြောက်စရာသာဖြစ်တယ်။
အိပ်ခြင်းအဆင့်ထဲက အိပ်မက်မက်တဲ့ Rapid eye movement (REM) အဆင့်မှာအများဆုံးဖြစ်တယ်။ အများအားဖြင့် ညဦးပိုင်း အိပ်ပျော်ပြီးအချိန်အတွင်းဖြစ်တယ်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတုံးမှာဖြစ်တယ်။ အိပ်စက်ခြင်းတခုရဲ ပဌမ ၃ ပုံ ၁ ပုံမှာအဖြစ်များတယ်။ သုတေသနတခုအရ သန်းခေါင်နဲ့ သန်းခေါင်ကျော် ၂ နာရီကြား များတယ်။ မက်နေချိန် ၁ဝ မိနစ်ကနေ ၂ဝ မိနစ်အထိကြာတယ်။
ယောက်ျားလေး ၅-၇ နှစ် အဖြစ်များဆုံး။ ၃-၇ နှစ် ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး ဆတူဖြစ်တယ်။ ၁၂ နှစ်အထိ အဖြစ်နည်းလာတယ်။ လူကြီး ၂့၂% နဲ့ ကလေး ၆့၅% မှာ ဖြစ်တယ်လို့တွေ့တဲ့သုတေသနလည်းရှိတယ်။ တချို့
ဘာလို့ဖြစ်သလည်း။ ဖြစ်နိုင်ခြေသီအိုရီတွေသာရှိတယ်။ မအိပ်ခင် ညလယ်စာစားလို့ ဇီဝအလုပ်ပိုလုပ်ရခြင်း၊ စိတ်မကျဆေး၊ သွေးကျဆေးသောက်ခြင်း။ မိသားစုအတွင်း တယောက်မကဖြစ်ခြင်း။ Post-traumatic stress disorder စိတ်ဒဏ်ရာရပြီးနောက်ဖြစ်ရတဲ့ စိတ်ရောဂါ။ Anxiety disorders စိုးရိမ်စိတ်ကဲသူတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်။ မူးယစ်ဆေးနဲ့ အရက်တလွဲသုံးသူတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်။
မက်ပြီးရင် ရုတ်တရက်အိပ်ယာကနိုးလာမယ်။ အော်ဟစ်မယ်။ မျက်လုံးပြူးနေမယ်။ သူငယ်အိမ်ကျယ်နေမယ်။ အသက်ရှူမြန်နေမယ်။ နှလုံးခုန်မြန်နေမယ်။ သွေးဖိအားတက်နေမယ်။ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေမယ်။ ကြောက်ရွံ့နေမယ်။ ရင်တုန်နေမယ်။ ဇောချွေးပျံနေမယ်။ အိပ်မက်လိုမဟုတ်ပဲ တကယ်ခံစာခဲ့ရတဲ့အတိုင်း ပင်ပန်းနေမယ်။ ကလေးတွေမှာဖြစ်ရင် အိပ်ယာကနိုးလာပြီး ထငိုမယ်။ အော်ဟစ်မယ်။ အဲလိုကနေ ဆက်ပြီး Sleepwalk လမ်းလျှောက်တယ်။
အဲလိုကနေ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ နှလုံးရောဂါ၊ အဝလွန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်ကဲခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ တချို့မှာ မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေလိုစိတ်ဖြစ်ခြင်း။
ကလေးတွေမှာဖြစ်တာကို နှစ်သိမ့်ပေးရမယ်။ ကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ပေးရမယ်။ ကလေးတွေ ငယ်စဉ်က အဲလို ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကြီးတော့ စိတ်ရောဂါထူးမဖြစ်ကြပါ။
ကုသမှုအကြံပြုချက်တွေကတော့ အိပ်ချိန်မှန်စေခြင်း၊ အစားစားချိန်မှန်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ယောဂကျင့်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်းတွေပါတယ်။ အိပ်ယာနေရာ သက်တောင့်သက်သာရှိစေသင့်တယ်။ မအိပ်ခင် စိတ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်။ လူကြီးတွေကို Benzodiazepine ခေါ်စိတ်ငြိမ်ဆေးပေးနိုင်တယ်။ Melatonin 1 to3mg ဆေးကိုလည်းညွှန်တယ်။
ပြည်ပနိုင်ငံရေးမှာ လုပ်ဘော်ကိုင်ဖက်တယောက် တင်ထားတဲ့ပို့စ်ကပုံဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဥပဒေက ပေါ်လစီသတ်ပုံနဲ့ရေးတာမဟုတ်လို့ ပုဒ်မ ၂၉၄ (ဆဲရေးတိုင်းထွာမှု) နဲ့ငြိတဲ့တရားခံကို လွှတ်ပေးလိုက်ပုံရတယ်။
မေးခွန်းတွေကို ကျော်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကိုလည်း ကျော်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဆောရီး။
၁။ ဆရာ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ သမီးအဖေ အိပ်နေရင်းနဲ့ ရုတ်တရက် လေထတက်ပါတယ် ဆရာ ဂေ့ဂေ့နဲ့ လေတက်နေရင်းနဲ့ ခဏနေတော့ ချောင်းဆိုးရာမှာ သွေးပါ ပါလာပါတယ် ဆရာ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးချောင်းဆိုးတာသလိပ်ထဲသွေးစပါလို့ပါ။ ခုညမှစဆိုးတာပါ။ စစဆိုးဆိုးချင်းမှာပဲသွေးစပါလို့ပါ။ သွေးကအနီရဲရဲမဟူတ်ပါဘူး။ အဆုတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖတ်ကြည့်တော့တခုမှမပါပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆရာအားတဲ့အခါ ဘာကြောင့်သွေးပါတယ်ဆိုတာဖြေပေးပါနော်။
မိန်းမပါ။ အသက်၂၄နှစ်။ အိမ်ထောင်သည်သားလေးတယောက်ရှိပါတယ်။ သားလေးကတနှစ်လေးလပါ။ ခုညမှချောင်းဆိုးလို့ ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့မှ မပြရသေးပါဘူးဆရာ။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်မအသက် ၂၃ ရှိပါပြီ ။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂လက ချောင်းဆိုးသွေးပါဖြစ်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြပါတယ်။ ဓာတ်မှန် NAD နဲ့ သွေးစစ် TB negative ပါ။ ဆရာဝန်က အဆုတ်လေပြွန်ရောင်တာလို့ဟြေပါတယ်။ Cefixime နဲ့ Flemax ဆေး၂မျိုးကို ၅ရက်သောက်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက် ပြန်ပျောက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက် ၂ပတ် အကြာမှ ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲ့ဆေး ၂မျိုးကိုပဲသောက်ရင်း ပြန်ပျောက်သွားပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း အအေးမိ မီးခိုးမွှန်မိရင်း ချောင်းပြန်ဆိုးပြီး အသက်ရှုကြပ်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ချောင်းဆိုးသွေးပါတာမျိုး ၂ကြိမ် ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဆရာ့ဆီကို အားကိုးစွာနဲ့ စာရေးလိုက်တာပါ။ လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေကတော့ ချောင်းဆိုး Clear Thick Mucus တခါတရံ အသက်ရှူကြပ် မှောက်အိပ်မိတဲ့အခါ ရင်ဘက်ကိုဖိထားမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ တခါတလေ ချောင်းဆိုးပြီး သွေးအနီရောင်ပါ။ မဖြစ်ခင်တပတ်ကလည်း ချောင်းနာဖူးပါတယ်။ အခုမနာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၄။ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါရှင်။ သမီးအမေက လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က TB ရောဂါဖြစ်ပြီး အဲတုန်းက သွေးတွေအန်ပါတယ်။ နောက်တနှစ်တခါလောက် နည်းနည်းထပ်ပြီး သွေးလေးတွေပါတတ်တယ်။ ဆေးထိုးရင် ပျောက်သွးပြန်ရော။ ခုနောက်ပိုင်း သွေးပါရင် နည်းနည်းများရင် ဆေးရုံတောင်တက်ရတယ်ဆရာ။ တနှစ်တခါပါနေလို့ မနှစ်ကနဲ့ဒီနှစ်ဆို ဆေးရုံတက်ရတယ်။ ထပ်ပြီးဆေးတွေစစ်တော့လည်း အဆုတ်မှာ TB လက္ခဏာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဆေးသောက်ခဲ့တုန်းက ၆ လကို ရက်မှန်မှန် သောက်ခဲ့တယ်။ အမေကသွေးတိုးပြီး အစာမကျေလို့ ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်း သွေးပါလာတယ်။ အဲဒါက တနှစ်တခါလို ဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုကုသနိုင်လို့ရလဲ ဆရာအကြံလေးပြုပေးပါရှင်။
ဖြစ်တဲ့သူ အသက် မသိ။ သွေးအန်တာနဲ့ ချောင်းဆိုးသွေးပါတာ မတူ။
အသက် ၅၄ ပါဆရာ။ ဖြစ်ရင်ချောင်းပါဆိုးလာတယ်ဆရာ။
၅။ ဆရာ မင်္ဂလာပါ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ အခုလေးတင်ပဲ သမီးက အိပ်နေရင်း ချောင်းထဆိုးတာ သွေးပါလာပါတယ်၊ ပထမတခါဆိုးတာ သွေးပါပြီး နောက်အခေါက်တွေမပါတော့ပါဘူး၊ သွေးကအနီရောင်လတ်ဆတ်ပါတယ်၊ ချောင်းဆိုးနေတာ ၄ ရက်လောက်ရှိပါပြီ၊ ပထမဆရာဝန်နဲ့ပြတာမပျောက်လို့၊နောက်တယောက်ပြောင်းပြပါတယ်၊ ၄ ရက်အတွင်းမှာ ၂ ရက်လောက်ဖျားလိုက်ပါသေးတယ် ခုတော့အဖျားမရှိတော့ပါ၊ စားနိုင်ဆော့နိုင်လန်းပါတယ်ဆရာ၊ ညပိုင်းဆို အစာမကြေပြီး အန်ရင်း ချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်၊ ဒီစာမပို့ခင်လွန်ခဲ့တဲ့တနာရီလောက်ကအန်တာပါ၊ ဘယ်နေရာမှနာတယ်မပြောပါ၊ အန်ပြီးအိပ်သွားတာပါပဲ၊ လောလောလတ်လတ်စားထားတဲ့အစာနဲ့သွေး 10ML လောက်ပါပါတယ်၊ ညနေက Cefixime 100 oral suspension 5ml နဲ့ ဆရာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးအမှုန့်ရောတိုက်ပါတယ်၊ ကလေးအသက် ၄နှစ်ကျော်၊ မိန်းကလေးပါ၊ ဆေးစာအုပ်ကိုလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်ပါ့မယ်၊ တခါမှမမေးဘူးလို့စည်းကမ်းနဲ့မကိုက်မညီခဲ့လျှင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ၊ ဆရာကျန်းမာချမ်းသာပါစေ
ဖြစ်တဲ့သူ အသက်-ကျား-မ မရှင်းပါ။ သမီးဆိုတိုင်း ခေါင်းရှုတ်ရတယ်။ မေးတဲ့သူရဲ့ သမီးလား။
ချောင်းဆိုးသွေးပါဖြစ်စေတာတွေကများတယ်။ တီဘီကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားတာ မမြှးပါ။
၁။ ကိုယ်ပူ = 100 F (37.8 C) ကျော်လောက် ၁ဝ ရက်ကြာဖျားမယ်။
၂။ ချောင်းဆိုး = ချောင်းဆိုးနေတာ ၂-၃ ပါတ်ကြာနေနိုင်တယ်။
၃။ ချောင်းဆိုးသွေးပါ = သွေးအနီရောင် နည်းနည်းလေး သလိပ်ထဲရောပါမယ်။
၄။ ချမ်းမယ် = ကိုယ်ပူချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် မပူပဲဖြစ်ဖြစ် သူများထက် ချမ်းနေမယ်။
၅။ ရင်ပတ်နာ = ချောင်းဆိုးရလို့ရော အဆုပ်မကောင်းလို့ပါ ရင်ပတ်နာမယ်။
၆။ ညချွေးထွက်ခြင်း = ကလေး-လူကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။
၇။ အသက်ရှူတမျိုးဖြစ်ခြင်း = ခက်ခဲနိုင်တယ်။ မဝဖြစ်နိုင်တယ်။ ပင့်ရှူရနိုင်တယ်။
၈။ မောပန်းနေခြင်း = အလုပ်မပင်ပန်းဘဲ မောနေမယ်။ အားကုန်နေမယ်။
၉။ အစားပျက်ခြင်း = ဟင်းကောင်းလည်း မစားချင်ဖြစ်မယ်။
၁ဝ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း = ပိန်လာမယ်။
၁။ Infections ပိုးဝင်ခြင်းများ
• Acute and chronic bronchitis ရက်တိုနဲ့ တာရှည် လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊
• Tuberculosis တီဘီ
• ဖန်းဂတ်းစ် ခေါ် မှိုပိုးဝင်ခြင်း
• Pneumonia နူမိုးနီးယား
• Lung abscess အဆုပ်ပြည်တည်ခြင်း၊
• Bronchiectasis အဆုပ်ရောဂါတမျိုး၊
၂။ Tumors အကျိတ်များ
• Bronchial cancer ဘရောင်ခီရယ်ကင်ဆာ
• Carcinoid ကာစီနွိုက်
၃။ Cardiovascular အဆုပ်သွေးကြောရောဂါများ
• Lung infarct or Pulmonary embolism အဆုပ်သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊
• Mitral stenosis နှလုံးအဆို့ရှင်ကျဉ်ခြင်း
၄။ Trauma ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
၅။ Other အခြားအကြောင်းများ
• Foreign body ပြင်ပပစ္စည်းဝင်ခြင်း
• Hemorrhagic diatesis ရောဂါ
• Goodpasture and other immunological disorders ရောဂါများ
ရင်ပတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ရမယ်။ ကရိယာထည့်စစ်တာ လိုတာရှိတတ်တယ်။ ၃၄% မှာ ဘာကြောင့် သွေးပါသလဲ ရှာမရပါ။ အကြောင်းရင်းကို ကုသရမယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ အဆုပ်တီဘီကပေါတယ်။ တီဘီကို ဆေး ၆ လတိတိ စနစ်တကျသောက်ရင် တီဘီပိုးတွေသေပါမယ်။ တီဘီဒဏ်ကြောင့် အဆုပ်မှာ ထိခိုက်ခံထားရမယ်။ တချို့က ကောင်းသွားပြီး၊ တချို့မှာ အမာရွတ်သဘော ကျန်တယ်။ တခြားဗက်တီးရီးယား ဝင်တာလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ပိုးသေဆေးသောက်ရင် ပျောက်မယ်။ ဆေးယဉ်တီဘီကိုလည်း စဉ်းစားရတယ်။
2. Bone tuberculosis အရိုး တီဘီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/bone-tuberculosis.html
3. Infertility and TB (1) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) 111http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-and-tb-1.html
7. MDR-TB ဆေးယဉ်တဲ့ တီဘီ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/11/mdr-tb.html
8. More money needed to beat TB တီဘီရောဂါနှိမ်နင်းရန် ဒေါ်လာ ၅၆ ဘီလီယန်လိုအပ်
9. Pleural effusion အဆုတ်အိတ်ထဲ အရည်အောင်းခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/pleural-effusion.html
10. Primary Complex ကလေးတီဘီ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/primary-complex.html
11. TB (Tuberculosis) တီဘီ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2008/10/tuberculosis-tb.html
12. TB Medicines Side Effects (တီဘီ) ဆေးတွေ နဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/side-effects-of-tb-medicines.html
13. TB No more in Medical Curriculum ဆရာဝန်တွေကို တီဘီ သင်မပေးကြတော့တာ စိုးရိမ်စရာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2009/10/tb-no-more-in-medical-curriculum.html
14. TB Q and A (တီဘီ) အမေး-အဖြေ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/09/tb-q-and.html
15. TB Q and A (တီဘီ) အမေးအဖြေ (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/01/tb-questions.html
16. TB Signs & Symptoms တီဘီရောဂါလက္ခဏာများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/tb-signs-symptoms.html
17. TB Signs & Symptoms တီဘီရောဂါလက္ခဏာများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/tb-signs-symptoms.html
18. TB Treat the root cause အခြေအမြစ်ကို မသတ်နိုင်သရွေ့ မပျောက်ပါ
19. TB အသစ်လား အဟောင်းလား http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/05/tb.html
20. Tuberculin test (တီဘီ) အတွက် (ကြူဘာကူလင် တက်စ်)http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/10/tuberculin-test.html
21. Hemoptysis ချောင်းဆိုး သွေးပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/hemoptysis.html
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းခေတ်ဦးမှာ မြန်မာစာသတ်ပုံကို မူရင်းအတိုင်းသာ ရေးခွင့်ရှိပြီး ၁၉၈ဝ ကျော်မှသာ ပြင်ခိုင်းတယ်။ ၁၉၈၈ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ ပြင်ထားတဲ့သတ်ပုံကိုသာ မရေးမနေရနဲ့ ထုတ်သမျှစာအုပ်တွေမှာ အဲတာသာရေးစေတယ်။
၃။ လင်္ကာစကားပြေ နှစ်ထွေရောဆိုပြီး ရေးဟန် သုံးမျိုးရှိတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မှန်နေတဲ့သတ်ပုံကို ပေါ်လစီအရပြောင်းလိုက်ချိန်ကစပြီး တစ်မဟုတ်ရင် ထုတ်ဝေခွင့်မပေးပါ။ အခုလည်း အဲတာသာ မှန်သလိုလို အတည်ပေါက်လုပ်ထားတယ်။ မြန်မာစာသတ်ပုံဟာ နှစ်ထွေသာမက ခုနစ်ထွေကဖြစ်လာပါတော့တယ်။
၂ဝ၁ဝ တုန်းကရေးခဲ့တာ ပို့်စ်တခုက အမတ်လုပ်ချင်တယ်တဲ့။
ဖွဲ့စည်းပုံအောက်က လွှတ်တော်အခင်းအကျင်းမှာ လျှာထွက်အောင်ဟောသော်လည်း ဆန်ဖြူဖြူတခွက်မှ ထွက်လမ်းမမြင်ဆိုသလို ရှိနေမယ်။
အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ တိုဘီဟူပါက ပြောပါတယ်။ ခင်ဗျား ဘယ်ကိုသွားနေတာဖြစ်ဖြစ် သွားတဲ့နေရာက မှားနေတယ်ဗျတဲ့။
ဆင်ကျုံးသွင်းသည်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ Elephant crushing oratraining crush လို့ ခေါ်တယ်။
မနေ့က ရေဒီယိုဆွေးနွေးခန်းမှာ မေးခွန်းနဲ့ တိုက်ရိုက်မသင့်လို့ မပြောဖြစ်ခဲ့တာတာရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုသတင်း။ ဒီသတင်းလည်း ရေကြီးတဲ့အောက် မြုပ်သွားပုံရတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကိုဂုဏ်ပြုတာ မကောင်းမရှိပါ။ အလားတူ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းဖြစ်ဖြစ် ဒဂုန်တာရာ ဆရာတင်မိုးဖြစ်ဖြစ် ဂုဏ်ပြုကြတာ မကောင်းမရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ စာရေးဆရာတွေ ကဗျာဆရာတွေကို ဂုဏ်ပြုသူတွေက မူလသတ်ပုံကိုလိုသလိုပြင်ပြီး ဂုဏ်ပြုနေကြတာတော့ မကောင်းပါ။
ဗိုလ်ချုပ်ကိစ္စမှာ တမျိုး။ ကာလဒေသရွေးတတ်ဖို့လိုတယ်။ ဒိထက်အရေးကြီးတချက်ကို ရေးပါရစေ။ အက်တစ်ဗစ် ခေါ်တဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ လုပ်ဆောင်ကြရတာနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ မတူတတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီဟာလည်း အစိုးရတာဝန် ယူလာရရင် အရင်ကနဲ့ မတူတော့ပါ။ အဲဒီသုံးမျိုးက တထပ်တည်း မကျပါ။ အဲဒီကနေ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
သဘာဝကျတဲ့ပဋိပက္ခသာမကာ တမင်တကာဖန်တီးတာလည်းရှိတယ်။ ဖန်တီးယူတာကို ကျုံးသွင်းတယ်လို့ ခေါ်နိုင်တယ်။
အဲလိုတွေကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ကျစေနိုင်တယ်။ အခါရာသီသာမက အရိပ်အကဲလည်းသိရမယ်။ ကျုံးသွင်းတတ်သူတွေကို အထင်မသေးပါနဲ့။
သတိလက်လွတ်ခြင်းနဲ့ အီမိုးရှင်းအပြင် ထူးခတ်ခံထားရသူတွေနေ လုပ်နေတာလို့လည်း သိပါ။
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းခေတ်က မဆလ ခေါ် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာ တိုင်းပြည်တခုလုံး စဉ်းစားတွေးခေါ်တာကို အတင်းရိုက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်စာအုပ်တွေသာ ထုတ်ဝေခွင့်ရပြီး လူတိုင်းကို သင်ယူစေ ဖတ်စေခဲ့ပါတယ်။ ၂၆ နှစ်ကြာတယ်။ မျိုးဆက်တခုလို့ ပြောနိုင်တယ်။
အဲဒီခေတ်ဦးမှာ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီစာအုပ်တွေကအစ မြန်မာစာသတ်ပုံကို မူရင်းအတိုင်းသာ ရေးပါတယ်။ ၁၉၈ဝ ကျော်မှသာ ပြင်ခိုင်းတယ်။ ၁၉၈၈ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ ပြင်ထားတဲ့သတ်ပုံကိုသာ အတင်းအဓမ္မ မရေးမနေရ လုပ်ခဲ့တယ်။ ထုတ်သမျှစာအုပ်တွေမှာလည်း အဲတာသာရေးစေတယ်။ မျိုးဆက်တခုကြာတယ်။
မဆလ အိုင်ဒီယော်လောက်ဂျီနဲ့ တတွေကို တစ်လုပ်ခိုင်းတဲ့သတ်ပုံ အတူတူသဘောသာဖြစ်တယ်။
မဆလ ရဲ့ အညမည ကတော့ စာအုပ်တောင် လိုက်ရှာမရတော့ပါ။ တစ်သတ်ပုံကတော့ နေပြည်တော်ထီးနန်းကနေ ဇနပုဒ်တွေအထိ လွှမ်းမိုးနေရာယူထားဆဲဖြစ်တယ်။
အရင်က နိုင်ငံရေးမှားပြီး သတ်ပုံမှန်ခဲ့တယ်။ အခုက နိုင်ငံရေးမှန်စပြုလာပြီး သတ်ပုံမှားနေတယ်။ မြန်မာစာကို ကယ်တင်နိုင်ရေး တတပ်တအားပါဝင်မှသာရမယ်။
နိုင်ငံရေးသမိုင်းရော မြန်မာစာသမိုင်းကိုပါ သိသင့်တယ်။
လွတ်လပ်ရေးရကာစ ကွန်မြူနစ်အင်အားစုတွေ ကွဲပြဲကြတယ်။ တောခိုကြတယ်။ မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ကွဲပြဲကြတယ်။ အတိုက်အခံပြုကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်တခုလုံးဟာ မြန်မာစာအရေးအသားမှာ စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကနေ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ ကွဲကြပေမဲ့ မြန်မာစာပေါ်လစီသတ်ပုံနောက်လိုက်ကြမှာတော့ တူညီနေကြတယ်။
မမှန်တာမှာ လာတူညီနေကြခြင်းသည် ကောင်းသောလက္ခဏာမဟုတ်။
အဓိဋ္ဌာန် နှင့် သန္နိဋ္ဌာန်
၁။ ဆရာ ဒီစာကရော အမှန်လားသိပါရစေ။
အဓိဋ္ဌာန = ဆောက်တည်းခြင်း၊ အကြောင်း၏တည်ရာ၊ အဓိဋ္ဌာန်လို့ ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန်ကဆိုပါတယ်။
၂။ ပို့စ်နဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့ မေးပါ့ရစေ ဆရာ။ သံဒိဌာန်လား၊ သံဓိဌာန်လား သိချင်လို့ပါဆရာ။
အဓိဋ္ဌာန် = စိတ်ကို အခိုင်အမာ ဆောက်တည်ခြင်း။
သန္နိဋ္ဌာန် = ဆုံးဖြတ်ချက်။
အဓမ္မ = မသူတော်တရား၊ မတရားသောအမှု။
အဓိကရ = ထင်ရှားကြီးကျယ်သော။
အဓိပ္ပါယ် = ဆိုလိုရင်းသဘော။
အဓိပတိ = အကြီးအချုပ်။
အနမတဂ္ဂ = အစမထင်သော။
အနာဂတ် = ဖြစ်လတ္တံ့သောကာလ။
Food and diet writing links အစားအသောက်နှင့် အာဟာရစ...
Malaria Prophylaxis ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေး
Waterborne Diseases ရေကတဆင့်ကူးစက်သည့် ရောဂါများ
တပါး တခြား တရပ် တတွေ တခွန်း တချက် တဝ တယောက်
The Road နိုင်ငံတော် ဘယ်လမ်းပေါ်မှာလဲ
ဧည့်သည် သံဝေဂ လင်္ကာ
BCG Scar ပခုံးဖေါ်အင်္ကျီ
ဝါဆိုဦး ရှုခင်း ကွန်မင့်များ
တာ နှင့် ဒါ ရက် နှင့် ရပ်
Cell phone towers and Health ဆဲလ်ဖုန်းတာဝါတိုင်မျာ...
Lawrence of Arabia မုဆိုးဘို ထီးရိုး
သမိုင်း နှင့် သတ်ပုံ
Medicated Stick ကျဉ်းဆေးဆိုတာ
The Emperor's New Clothes ဘုရင်ကြီး၏ ဝတ်ရုံတော်သစ်...
Bug bites ပုရွက်ဆိတ် ကြမ်းပို ကိုက်လျှင်
Viagra in pregnancy ဗိုင်ယာဂရာစမ်းသပ်မှု ရပ်လိုက်ပြ...
စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ၇ နှင့်စပ်လျဉ်း၍
Baby Safe Sleep ကလေးငယ်အတွက် စိတ်ချရတဲ့အိပ်စက်ခြင်...
နန်းဘုံသီဟာဘွေ ကပီ ယိုးဒယား
ဦးကြင်ဥ ကဆုန်လဖွဲ့ 
Chicken Skin ကြက်အရေပြားနဲ့တူတဲ့ရောဂါ